▷ Ireo mpampihinana alika tsara indrindra, inona avy ireo karazana ao? | Tontolo alika
Ahoana ny fomba hisafidianana ny lovia sakafo ho an'ny alika
Susana godoy | | Fahano alika sy alika kely, curiosities
Rehefa hividy alika alika isika, ny iray amin'ireo zavatra voalohany tsy maintsy hividianantsika dia ny vilia fisakafoanana. Izy io dia zavatra izay hampiasainao isan'andro ary, noho izany, ilaina ny mahazaka, mora diovina, ary ambonin'izany rehetra izany dia mety amin'ilay volony.
Imbetsaka isika no mividy ilay tiantsika, nefa tsy manisy fiheverana ny filan'ilay alika. Noho izany, hanazava isika ny fomba hisafidianana ny lovia sakafo ho an'ny alikako.
Ny feeder tsara indrindra ho an'ny alika
Feeder Arquivet ho an'ny ...
HelpAccess Omedero ho an'ny...
Manenjika feeder ho an'ny ...
GAPPET Slow Feeder...
1 Karazana lovia fihinana alika
1.1 Mpamatsy vy
1.4 Avy amin'ny hazo
1.5 Ankizy kely
1.6 mandeha ho azy
1.7 Mpihinana seramika
1.8 Mpihinana plastika
3 Tokony ho ao an-tsininy foana ve ny sakafo?
4 Ohatrinona ny alika no tokony hihinana?
5 Aiza no hividianana feeder alika mora vidy
Karazana lovia fihinana alika
Izy ireo no tena atolotra indrindra. Manana lanja ampy izy ireo ka tsy afaka mamadika azy ilay volony (raha biby lehibe izy dia afaka mividy foana izay misy ny sisiny rakotra fehikibo), mora diovina izy ireo, ary raha tsara kalitao izy ireo, dia toy izany koa anticorrosive.
Trixie - mijoro amin'ny ...
Araka ny tondroin'ny anarany, dia andiana feeder izay tsy mikasika ny tany toy ireo fototra fantatsika. Matetika izy ireo dia manana karazana fanohanana ary eo amboniny, dia hametraka lovia iray na roa isika izay ahafahanao mametraka sakafo na rano. Betsaka ny maodely mety ho hitanao, miaraka amin'ny fanohanana maivana kokoa na malalaka kokoa ary mahatohitra kokoa. Izy ireo dia eo amin'ny haavo antonony, amin'ny ankapobeny, noho izany dia atolotra ho an'ny alika lehibe. Hahafinaritra kokoa izany ary hanana fihetsika tsara kokoa izy ireo rehefa misakafo. Tombony daholo ireo!
Matetika mitranga izany, indrindra amin'ny alika kely, izay amin'ny fotoana fisakafoanana dia manao izany amin'ny hanoanana be loatra. Ka raha mametraka lovia fototra azy ireo isika dia azo antoka fa hiafara amin'ny fihinanana mihoatra ny ilaina ary tsy izany no tadiavintsika. Ireo mpamatsy antivoracidad dia mety amin'ny volonareo miala sasatra, maharitra fotoana fisakafoanana ary tsara kokoa ny fandevonan-kanina. Izy io dia hevitra iray izay matetika manana karazana labyrint na lalao manafina kely ny sakafo, mba hahatonga ny faharetana hahatratra ireo biby fiompintsika.
Avy amin'ny hazo
BOENTA Feeder ho an'ny...
Ny iray amin'ireo safidy voajanahary sy be mpitia indrindra dia ny vilia alika hazo. Azonao atao aza ny manamboatra azy ireo any an-trano miaraka amin'ny tabilao na paleta sasany. Na dia manapa-kevitra ny hividy azy ireo aza ianao dia hahita ny safidin'ny feeder roa izay iray amin'ireo tianay. Amin'izay ny fanohanana dia vita amin'ny hazo sy ny lovia na lovia vy na varahina vita amin'ny vy.
Marina fa ankoatry ny famaranana na ny fitaovany, ny habe dia iray ihany koa amin'ny mampiavaka ny sakafon'ny alika. Noho izany, raha zanak'alika ny biby fiompintsika dia tsara kokoa ny misafidy ny bobongolo kely indrindra amin'ny habeny. Ka afaka mihinana sakafo tsara kokoa isika ary mazava ho azy, ho hitantsika ao aminy ihany koa ireo maodely manokana indrindra.
AONBOY Feeder ...
Araka ny tondroin'ny anarany, ny feeders mandeha ho azy dia manana bokotra izay, raha tsindriana, dia hanampy ny vola marina sy marina ho an'ny alikanay. Tsy manadino izany koa mazàna dia manana «timer» izy ireo. Tombony ho azy fa amin'izany fomba izany dia tsy hihoatra ny sakafony izy ireo, hialana amin'ny labiera tsy ilaina. Ho fanampin'izany, voaaro koa ny sakafo ary mahatonga azy io hitandrina tsara sy lava kokoa.
TRIXIE BE NORDIC Feeder...
Mpihinana seramika tena tsara tarehy izy ireo, nefa marefo. Raha lavo izy ireo dia mora tapahina. Ny alika kely ihany no torohevitra omena azy ireo, toy ny Yorkshire terrier, Kitapo maloto Mallorcanna Bichon maltese.
TRIXIE mpamatsy plastika ...
Izy ireo no mora indrindra. Ankoatr'izay dia tsy mora vaky izy ireo ary voadio mora foana. Saingy manana fatiantoka roa izy ireo: ny iray amin'izany izy ireo dia mety hiteraka allergy ny alika, ary ny iray hafa dia izay Koa satria kely dia kely ny lanjany, dia tsy tsara ho an'ny volon'ondry na lehibe volony.
Momba izany iray amin'ireo karazana mpampihinana alika be mpitady indrindra. Satria tsy ny fototr'izany no mamela ny sakafo ho any ivelany, ny mifanohitra amin'izay no izy. Ho voaro hatrany izy io ary midika izany fa voaaro ny fananany lehibe rehetra. Amin'ny tsy fifandraisana amin'ny rivotra dia ho voatahiry tsara kokoa izy io, tsy misy isalasalana momba izany. Izy ireo koa dia karazana dispenser ka ny volonao dia manana ny dosia marina foana amin'ny fotoana tadiavinao.
Araka ny tondroin'ilay anarana dia izy ireo no hevitra fototra azontsika atao ao an-trano miaraka amin'ny kaontenera plastika ary ataovy mihazakazaka bebe kokoa aza ny fisainantsika ary mamorona dispenser amin'ny boaty baoritra. Matetika koa ny fanodinana tavoahangy plastika mba hamoronana mpamahana alika, fa hatrany kosa ny fisorohana ny spikes na ny tapa-bolo mba tsy haratra.
Ankehitriny rehefa hitantsika ny karazana lovia fisakafoanana alika, dia afaka mahazo hevitra momba izay tokony hofidintsika isika. Na izany aza, misy zavatra maromaro izay tsy maintsy dinihintsika alohan'ny hividianana azy, dia:
Sofina alika: raha lava ny sofiny, tsy maintsy misafidy feeder avo sy tery isika hisorohana ny biby manana olana rehefa misakafo.
toetra: tsy maintsy mividy feeder misy sisin-tsoaka ho an'ny alika mitebiteby isika; Etsy ankilany, raha mangina izy io, afaka manome anao ny iray amin'ny sisiny ambany izahay.
Haben'ny vilia baolina: mila vilia kely ny alika kely, ary mila vilia lehibe kokoa ny lehibe.
Saingy, azontsika atao izao ny misafidy ny vilia sakafo ho an'ny alikantsika. Raha manana fisalasalana tsy voavaha ianao dia aza misalasala mifandray aminay 🙂.
Tokony ho ao an-tsininy foana ve ny sakafo?
Toy ny zava-drehetra, manana ny tombony izy io nefa koa ny fihemorana. Ny marina dia toy ny fitsipika ankapobeny, mahazatra antsika ny mamela sakafo ao anaty feeder foana. Fa maninona Satria amin'ity fomba ity dia tsy miraharaha antsika isika ary afaka mihinana ny biby fiompintsika rehefa tiany izany.
Fa raha miresaka momba ny alika kely na biby izay manana olana ara-pahasalamana manokana isika dia tsy tokony hamela izany sakafo tontolo andro izany. Hatramin'izay dia afaka mizaka ny olana mahazo azy ireo izy ireo ary koa ny lanja fanampiny. Izany rehetra izany dia misy fiatraikany ratsy amin'ny fahasalamanao, araka ny fantatsika tsara. Noho izany, ilay antsoina hoe 'fahanana maimaim-poana' dia tsy tokony hatolotra matetika.. Satria ny biby dia tsy ho fehezina toy ny manome azy ireo ny anjarany isan'andro.
Alohan'ny hanohizantsika hiresaka momba ny habetsany dia tsy maintsy mieritreritra momba ny alikantsika isika. Ny kely dia mila vola kely kokoa noho ny karazany lehibe. Toy izany koa, mila manome lanja ny fampihetseham-batana isan'andro isika, satria ny fandaniana bebe kokoa, ny fangatahana sakafo bebe kokoa, amin'ny ankapobeny, na dia fantatsika aza fa tsy izany indraindray. Noho io antony io dia miresaka momba ny teny na laharam-pahamehana foana izahay:
Ny karazana alika kely milanja telo kilao dia mila eo anelanelan'ny 60 ka hatramin'ny 85 grama isan'andro.
Ny karazany kely izay eo anelanelan'ny efatra sy 10 kilao dia azo omena sakafo 100-180 grama isan'andro.
Raha milanja eo amin'ny folo ka hatramin'ny roa-polo kilao ny biby fiompinao, dia mety hahatratra 300 grama ny isan'izy ireo.
Raha mihoatra ny 30 kilao ianao dia azo antoka fa hanakaiky ny 550 grama ary isan'andro ihany koa ny anjaranao.
Izy io koa dia mety hiteraka mifototra amin'ny anton-javatra hafa. Noho izany, tsy mahagaga raha mahazo amboara fandrefesana amin'ny sakafo sasany ividianantsika. Na izany aza, dia tokony hifampidinika foana amin'ny mpitsabo aretin-tokinao ianao.
Aiza no hividianana feeder alika mora vidy
Amazon: Ilay goavambe amin'ny varotra amin'ny Internet, manana mpamatsy alika marobe ihany koa. Avy amin'ireo mpaninjara, mankany amin'ireo takelaka vy tsy misy fangarony na ampitomboina roa miaraka aminy miaraka amina tohana hahazoana fampiononana bebe kokoa. Ny famolavolana rehetra ary mihoatra ny vidiny mirary dia ho ao Amazon.
kiwiko: Fivarotana biby fiompy manokana izy io, ka ao no ahitanao vokatra mihoatra ny 8000 mifandraika amin'izy rehetra. Manana magazay ara-batana izy ireo ahafahanao mijery akaiky ny vokatra tsara indrindra ananany ka tsy azo ajanona ireo mpamatsy sakafo.
zooplus: Miaraka amin'ny fihenam-bidy lehibe foana, Zooplus koa dia manam-pahaizana manokana momba ny biby. Noho izany, dia afaka mahita ny karazana safidy rehetra amin'ny biby rehetra ananantsika isika, na inona na inona karazany na habeny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fahano alika sy alika kely » Ahoana ny fomba hisafidianana ny lovia sakafo ho an'ny alika
Ny kidoro tsara indrindra ho an'ny alika lehibe sy goavambe ary mahafinaritra
Ny sakafo voajanahary 6 tsara indrindra ho an'ny alika